कार्यकारीको चाहनाः प्रेस र मानवअधिकार नियन्त्रणमा ! – RaptiSandesh
Home / Feature Breaking news / कार्यकारीको चाहनाः प्रेस र मानवअधिकार नियन्त्रणमा !
कार्यकारीको चाहनाः प्रेस र मानवअधिकार नियन्त्रणमा !
संसदमा दर्ता भएका र सरकारले तर्जुमा गर्दै गरेका केही विधेयकका मस्यौदा यतिबेला निकै चर्चामा छन् । खासगरी राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, मिडिया काउन्सिल तथा संघसंस्था सञ्चालनसम्बन्धी विधेयकका केही प्रावधानले पेसागत संगठनहरूलगायत नागरिक समाजलाई आन्दोलित बनाइरहेको छ । सेना र वन क्षेत्रसँग सम्बन्धितलगायत अरू थुप्रै विधेयकका प्रावधानले पनि नागरिक समाजको ध्यान खिचेको छ । सरोकारवालाहरु यस्ता विधेयक फिर्ता गर र सरोकारवालाहरुसँग परामर्श गरेरमात्र अगाडि बढाऊ भनिरहेका छन् भने सरकारका मन्त्रीले ती विधेयकलाई प्रतिष्ठाको विषय बनाएर ‘कुनै पनि हालतमा फिर्ता नहुने’ हठ प्रकट गरिरहेका छन् ।
प्रधानमन्त्रीको यो कथन झट्ट उचितै लाग्न पनि सक्छ । तर, कानुन निर्माणको प्रक्रियाको सन्दर्भमा हेर्ने हो भने यही भनाइले मात्र आश्वस्त हुन सकिँदैन । कानुनको तर्जुमा किन गर्नु प¥यो ? त्यो कानुन कस्काप्रति लक्षित हुन्छ ? र कानुनमा कस्तो व्यवस्था राख्ने रु यावत् विषय सरकारले नै निर्धारण गर्ने हो । यसरी निर्धारण गरेको विधेयकको मस्यौदा संसद्मा गएपछि सम्बन्धित संसदीय समितिमा छलफलका लागि पठाउन ससकिन्छ । त्यस्तो छलफलले सरकारले बनाएर पठाएको विधेयकका दफाहरुमा केही संशोधन त गर्न सक्ला थप्न वा घटाउन सक्तैन । यो दायराभित्र रहेरमात्र संसद्ले त्यो विधेयकलाई अगाडि बढाउने हो । त्यसकारण ‘संसद्को विवेकमा छाडिदिएर’ सरकार तथा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा पठाएको विधेयकको व्यवस्थाबाट पन्छिन मिल्दैन । त्यसको सम्पूर्ण दायित्व लिनैपर्छ । अर्को अर्थमा भन्ने हो भने कानुन कार्यकारीकै चाहनामा बन्ने हो । संसद्ले यस्तो कानुन बनाइदियो भनेर सरकार पन्छन मिल्दैन ।
१५ जेष्ठ २०७६, बुधबार ०७:१६
Previous: विप्लव समूहको समस्या सरकारले समाधान गर्नुपर्छः पौडेल
Next: वडा अध्यक्ष कपको उपाधि बेलटाकुरालाई